Category: Bandhiga Buugaagta
Qaybta 1aad Cabdillaahi Cabdi Shube (Bullo-xaar 1926kii – Hargeysa 1978kii) “Ilaahayoow cadawgeenna, Burjujuc iyo bagagac, Bukur awr ku raftiyo, Quraarad buur lagu tuuriyo, Beed maroodi ku joogiyo, Bisad uu jiidhay tareen iyo, Bilaalahoo kala duuliyo, Bad aleel ku dhacdiyo, Buul…
Hadimiyo Hantaaq (Naqdi kooban: Buugga Cabdillaahi Yuusuf ee Halgan iyo Hagardaamo Waatan qormadii oo dhamaystirani:- Hadimiyo Hantaaq (Naqdi kooban: Buugga Cabdillaahi Yuusuf ee Halgan iyo Hagardaamo) “Haa waa wadhiisii, Sardhadii walaaqnayd, Wiswiskiyo waswaaskii, Wiishkii la tegi jiray, Hurdadii la wici…
Hargeysa (dharaaro.net):- Mujaahid Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe) ayaa waxa uu ka waramay Taariikhda iyo doorkii Halgankii SNM ee Fanaanada Caanka ah ee Sahra Axmed Jaamac oo Xaalad Caafimaad u jiifta. Halkan hoose ka daawo muuqaalka
Garbihii arradnaa in kastoo, badankood asturmeen, haddana? Hargeysa, 13/8/2013ka
Garbihii arradnaa in kastoo, badankood asturmeen, haddana? Hargeysa, 13/8/2013ka. Haa….Immika ayaad mooddaa in la soo miiraabay. Hal-hays ayaynu u leenahay cirkii ayaa soo yeel-yeelanaya. Waa marka ay daruuruhu samaysmayaan ee ay is-raadsanayaan si ay u darrooraan. Garbihii arradnaa in…
Maah-maah Soomaaliyeed ayaa ahayd: “Hadal sokeeye iyo hilib Idaad labadaba waa la qaboojiyaa.” Afartan-bax iyo toddoba-bax ayaynu dhaqan iyo hiddaba u lahayn, sidaa darteed ayaan aniguna arrintan qoraalka u afartan-bixinayay, Waatan qormadii oo dhamaystirani.. Magacaabistaydii iyo Maagistaydii: Laba isku…